बोक्सीको आरोपमा निर्दोष चेलीलाई निर्घात कुटेपछी रवि लामीछाने एकै ठाउमा बसेर हेर्ने सकेनन !! अहिले भर्खरै उनि घटना भएको ठाउँ कैलाली पुगेर कुटपिट गर्ने र रमिता हेरेर बस्नेहरुको विरुद्ध चर्को आवाज यसरी निकाले ? भिडियो आफै बोल्छ !! - pnpkhabar.com
You are at:Home»भिडियो»बोक्सीको आरोपमा निर्दोष चेलीलाई निर्घात कुटेपछी रवि लामीछाने एकै ठाउमा बसेर हेर्ने सकेनन !! अहिले भर्खरै उनि घटना भएको ठाउँ कैलाली पुगेर कुटपिट गर्ने र रमिता हेरेर बस्नेहरुको विरुद्ध चर्को आवाज यसरी निकाले ? भिडियो आफै बोल्छ !!
बोक्सीको आरोपमा निर्दोष चेलीलाई निर्घात कुटेपछी रवि लामीछाने एकै ठाउमा बसेर हेर्ने सकेनन !! अहिले भर्खरै उनि घटना भएको ठाउँ कैलाली पुगेर कुटपिट गर्ने र रमिता हेरेर बस्नेहरुको विरुद्ध चर्को आवाज यसरी निकाले ? भिडियो आफै बोल्छ !!
By मनिषा थापा on २९ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १०:१७ भिडियो
भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको लुटतन्त्र र ठगी, अनियमिता र समाजमा देखिएको कुरुति, कुसंस्कार तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेश र स्वदेशमा भइरहेका ठगीका घटनालाई पर्दाफास गरेर पत्रकार लामिछाने अहिले चर्चाको शिखरमा छन् ।
अहिले सामाजिक संजालमा निकै चर्चामा आएको विषय निर्दोष चेलीलाई कैलालीको घोडाघोडीमा बोक्सीको आरोपमा कुटपिट भएको घटना आएपछी रवि लामिछाने त्यहिं ठाउँमा पुगेर बोलेका छन् जहाँ बोक्सीको आरोपमा एउटी चेलीलाई ६ घण्टासम्म निर्घात कुटपिट गरिएको सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ |